Gingde blọgụ | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Drivegbọ njem ezubere iche maka Mgbakwunye Mmemme Mgbasa Ozi
Anyị na-enweta ọrụ ma ọ bụrụ na ị pịa njikọ a wee zụta ihe na-enweghị ụgwọ ọzọ maka gị.
by Beverly Obere on Nwere ike 11, 2021
Kedụ ka m ga-esi nweta okporo ụzọ na Blog m?
Kedu ka m ga-esi nweta ele okporo ụzọ Iji Blog m?
Ịchọpụtara niche gị akọwapụtara wee bido mebe saịtị blọọgụ na -enye aka ma na -enye aka nke ị nwere oke mma ga -adọta na ịgụ na ịgbaso. Nke gị okporo ụzọ stats n'otu aka ahụ lelee nnọọ mba. Ọ dị mma, ị kwesịrị ịghọta na ị chọrọ ịchebe okporo ụzọ!
Nhọrọ nke nchịkọta akụkọ
Ntufu na Shopify: Ntinye 2021 - Nzọụkwụ Nzọụkwụ maka ndị mbido na Etu ị ga-esi malite azụmaahịa E-Azụmaahịa gị ma Nweta Ego Na Ntanetị (Akwụkwọ kacha mma maka nnwere onwe ego na akwụkwọ ọdịyo)
09/23/2021 08:00 elekere GMT
Ọtụtụ mgbe, ndị na -ede blọgụ, ọkachasị ndị na -anaghị etinye nnukwu uche na okporo ụzọ ọnụ ọgụgụ, amaghị maka otu ha ga-esi nweta ihe akpọrọ okporo ụzọ. Ọtụtụ ndị na -ede blọgụ na -adabere ugbu a na -echegbughị onwe ha banyere ịdị mkpa nke ime okporo ụzọ yana otu nke ahụ si agbakwunye nlanarị n'ịntanetị. Enwere ihe zuru oke nke ga -atụ gị ụjọ mgbe ọ na -adịghị onye ọ bụla na -eche banyere ihe ị na -enyocha.
ịde blọgụ nwere ike ịbụ Akụ
Ọ bụrụ na ị nọ n'ọrụ ịde blọgụ, ị nwere ike mee mgbalị gị niile wee mee ka ọ mara ya. Ọ bụrụ naanị na ị ghọtara ihe a tụrụ anya ka ị mee, yabụ, ị nwere ike ịkwalite onwe gị wee mepụta ndị na -eso ya.
Inweta Okporo ụzọ maka Blog gị
Nchegbu a bụ, olee otu ị ga-esi mepụta okporo ụzọ maka saịtị blọgụ gị? Buru n'uche na ọnụọgụ okporo ụzọ dị ukwuu bụ ihe niile ịchọrọ iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị irè. Iji mee ka nghọta gị bụrụ ihe ịga nke ọma na ihe a ma ama, buru aro ndị a n'uche.
Nwee ụdị otu e-mail maka ebe nrụọrụ weebụ gị niile. Ọ na-ewe ndị mmadụ nabatara na netwọkụ gị ịdenye aha. Nwere ike ịmalite site na onye ikwu gị, ndị ọrụ ibe gị, ndị ahịa, ndị mmekọ, na ezigbo ndị enyi.
Gụọ, soro, ma kwuo maka saịtị blọgụ nke onye ọ bụla ọzọ nke nọ n'ime ebumnuche gị akọwapụtara nke ọma. Jide n'aka na ị ga -edepụta okwu na -enye aka, nke bara uru na nke amamihe dị ka ha ga -e mirroromi gị ịde blọgụ ike. Ọ kwesịrị ka ị nweta mmasị nke ndị ọzọ, o yikarịrị ka ha ga -eso njikọ nke ọrụ gị.
Jiri ọrụ Ping-O-Matic rụọ ọrụ na saịtị ndekọ saịtị saịtị pinging mgbe ọ bụla ịhapụ.
Ziga saịtị blọọgụ gị na ntanetị nchọta na ntanetị na saịtị ntanetị. Ọtụtụ n'ime ha na-abịa n'efu n'oge a.
Echefukwala itinye njikọ nke saịtị blọọgụ gị na faịlụ mbinye aka email ị na-enye.
Na-enye njikọ ahụ oge niile na ibe saịtị gị ma ọ bụ na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ị na-enye ma hapụ. Mee nke a n'ụdị akwụkwọ ozi niile ị mepụtara.
Ọ bụrụ na ị jiri broshuọ dị ire, kaadị ọrụ, na mpempe akwụkwọ maka usoro azụmaahịa, gbaa mbọ bipụta URL saịtị gị.
Ọ na - edozi iji nweta URL ndepụta RSS nke ndị mmadụ nwere ike ịdebanye aha ngwa ngwa.
Buru n'uche ibipụta mmelite na saịtị blọgụ gị iji rata ọtụtụ ndị ahịa.
Gụnyere echiche ndị a na usoro gị ga - enyere gị aka nke ukwuu n'ịkwalite saịtị blọgụ gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, agbanyeghị n'otu aka ahụ ị na-achọ ịzụ ahịa!
Chọpụtala niche gị akọwapụtara wee bido mepụta saịtị blọọgụ bara uru ma baa uru nke ị na-eme nke ọma ga-adọta ịgụ na ịgbaso. Nchegbu a bụ, olee otu ị ga-esi mepụta okporo ụzọ maka saịtị blọgụ gị? Buru n'uche na oke ọnụọgụ okporo ụzọ bụ ihe niile ịchọrọ iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị irè. Nwee ụdị otu e-mail maka ebe nrụọrụ weebụ gị niile. Gụọ, soro, na comment na saịtị blọọgụ onye ọzọ nke dị na niche gị akọwapụtara.
KYNG Portable Power Station 540wh Solar Generator Backup Lithium Battery Dị ọcha Mgba Wave AC tinyekwa, 1000w elu, Mberede Power Tụkwasịnụ, CPAP, N'èzí, Maa ụlọikwuu, Portable Generator Rechargeable Inverter
09/23/2021 10:50 elekere GMT
Gbara akwụkwọ N'okpuru: ịde blọgụ, Okporo ụzọ echepụtara
Sistemụ Ọgwụ Ikuku
Amazon Prime Ebe E Si Nweta Kaadị
Shopshipping Shopify 2021
WordPress maka mmalite nke 2021
Kasị Mma na Ndụ
Mgbakwunye Mmemme Mmemme
Pụrụ Iche Resources
Nkwụ ụgwọ ego
Ahụike na ahụike
Eslọ maka ire ere na Illinois
Mee ka ederede m sie ike
Onye European Safelist
Onye na -ere ahịa ọrịre n'efu
State nke Art Mailer
Okporo ụzọ na-eduga 2 Ego
Mbọchị ịkwụ ụgwọ VM
The SEO Nyocha
Mgbanwe okporo ụzọ
Agụụ maka agụụ
Ndị Ọchịchị Na-achị
TE daybọchị ịkwụ ụgwọ
Fficgbọ okporo ụzọ
Okporo ụzọ Hog Hog
Sistemụ Ọgwụ Mmiri
Nkwado WP Online
Nkwupụta Mgbasa Ozi Social
Dị iche iche nke Mgbakwunye Mgbakwunye
Ups na Downs Of Ọbịa ịde blọgụ - Mara Otú Ọ na-enyere Gị…
Ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji zube okporo ụzọ na weebụsaịtị gị
I Kwesịrị Zụrụ Okporo ụzọ ezubere iche?
Zube fficzọ Mbata Site na Mgbasa Ozi
-Eduzi Atụmatụ na ezubere iche Okporo ụzọ Gị Internet Business…
Okporo ụzọ Saịtị
Kedu ihe mgbakwunye WordPress nwere ike imere gị?
Ndi WordPress Templates siri ike nghọta?
Etu ị ga-esi nwetakwuo okporo ụzọ na weebụsaịtị gị site na iji mgbanwe okporo ụzọ
Okporo ụzọ ezubere iche Bụ Nzuzo Maka Ezi Ahịa!
Olee otú ịhọrọ Mgbakwunye ọkọlọtọ N'ihi na gị na saịtị
Metzọ ndị ọzọ iji zube okporo ụzọ na weebụsaịtị gị
Nhazi okporo ụzọ ezubere iche
-Eduzi Atụmatụ maka ezubere iche Okporo ụzọ Gị Internet Business…
Ezubere Ngwaahịa Ngwaọrụ Gị Mmemme Mgbakwunye Mgbakwunye
Laghachi n'elu peeji
Copyright © 2021 · Copyblogger Nwa Okwu on Jenesis Framework · WordPress · Banye
Kekọrịta na Email
Nkwadebe ụtụ VIP - Ruo $ 6000 Ọganihu Ego
MụtakwuoNyocha nyocha nke 5
Wepụta obere, Ahịa dị ala - Nweta weebụsaịtị weebụsaịtị Amazon Ugbu a
Kporie Ndụ Kachasị Mma na Ndụ - Ngwaahịa Na-adịghị Ahụ Nke Na-adabara Ndụ Gị
Site n'ịnọgide na-achọgharị saịtị ị na-ekwenye na ojiji nke kuki